साइप्रस हिँडेका ११ विद्यार्थीलाई अध्यागमनले हचुवाको भरमा रोक्यो,विद्यार्थीहरूले अध्यागमनका डेस्क अधिकृतले पैसाको बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन् – PathivaraOnline
Home > समाचार > साइप्रस हिँडेका ११ विद्यार्थीलाई अध्यागमनले हचुवाको भरमा रोक्यो,विद्यार्थीहरूले अध्यागमनका डेस्क अधिकृतले पैसाको बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन्
साइप्रस हिँडेका ११ विद्यार्थीलाई अध्यागमनले हचुवाको भरमा रोक्यो,विद्यार्थीहरूले अध्यागमनका डेस्क अधिकृतले पैसाको बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन्
admin February 6, 2019 समाचार 0
काठमाडौं : अध्यागमनका कर्मचारीहरूले विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा (भिसा) मा साइप्रस हिँडेका ११ जनालाई हचुवाको भरमा फर्काइदिएको (अफ लोड) छ। जबकि उस्तै भिसा भएका अन्य १२ जना विद्यार्थीलाई साइप्रस जान प्रस्थान अनुमति दिइएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले साइप्रसको भिसा शंकास्पद भएको भन्दै सोमबार ४ जना र मंगलबार ७ जना विद्यार्थीलाई फिर्ता गरेको थियो।
अध्यागमन कार्यालयले ‘स्टुडेन्ट भिसाको प्रतिलिपिमात्र प्राप्त भएको र सो भिसा प्रष्ट नखुलेकोले निजहरूको भ्रमण शंकास्पद देखिएको हुँदा अध्यागमन कार्यविधि २०६० को दफा ३(१) ३ बमोजिम प्रस्थान अनुमति नदिइएको’ उल्लेख गरेको छ।
विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले फिर्ता गरिएकाहरूको भिसा र यात्रा शंकास्पद भएकोले रोकिएको बताएका छन्। तर उही स्थान र उस्तै प्रकृतिको भिसा भएका विद्यार्थीमध्ये केहीलाइ रोक्नु र केहीलाई प्रस्थान अनुमति दिनुको कारणबारे अध्यागमनका कर्मचारीहरू बोल्न चाहेनन्।
विमानस्थलबाट फर्किएका विद्यार्थीहरूले अध्यागमनका डेस्क अधिकृतले पैसाको बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन्।
अध्यागमनले आफ्ना साथीलाई फिर्ता गरेको थाहा पाएपछि बाँकी विद्यार्थी र उनका अभिभावकहरू छलफलका लागि बुधबार अध्यागमन विभाग गएका थिए। साइप्रस जान लागेका करिब २० विद्यार्थी बुधबार दिउँसो अध्यागमन विभागमा पुगेका थिए।
विद्यार्थीहरूले पाएको भिसा, र उनीहरूलाई थमाइएको अध्यागमनको पत्र।
फर्काइएकी मध्ये पर्वतकी दुर्गा शर्माले दिइसकेको प्रस्थान अनुमति समेत अध्यामगन अधिकृतले रद्द गरिदिएको बताइन्। शर्माले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘डिपार्चर कक्षमा पुगिसकेकी थिएँ। त्यहीँ आएर अध्यागमनका कर्मचारीले रोके।’
डिपार्चर छापमा समेत अध्यामगनका कर्मचारीले रातो पेनले केरमेट गरिदिएको उनले बताइन्। हचुवाको भरमा आफूहरूलाई फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ।
यसै साता झण्डै ७७ जना विद्यार्थी साइप्रस उडदैछन्।
साइप्रस जान विद्यार्थीहरूले आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरू सबैलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ सेमत दिएको छ। तर ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ समेत नक्कली भएको भन्दै अध्यामगन अधिकृतले आफूहरूलाई मानसिक तनाव दिएको आरोप विद्यार्थीहरूको छ।
१५ दिनको इन्ट्री भिसामा साइप्रस जान लागेका उनीहरूले बाँकी भिसा त्यही पाउँछन्।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले फिर्ता भएका र विधि सम्बत तरिकाले भिसा पाएका विद्यार्थीहरू साइप्रस जान पाउने बताए। विद्यार्थी रोकिएको सूचना पाएपछि महानिर्देशक पौडेलले नेपालस्थित साइप्रसको कन्सुलेट अफिसमा कुराकानी गरेका थिए।
महानिर्देशक पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘साइप्रसको कन्सुलेट कार्यालयले पठाएको सूचीमा भएका विद्यार्थीहरू रोकिँदैनन्। मैलै अध्यागमनमा उक्त सूची पठाइसकेँ।’
नेपालस्थित साइप्रसको कन्सुलेट अफिसले ७७ जना विद्यार्थीको भिसा प्रमाणिकरण गरेको थियो।
०७५ माघ २४ गते बिहिवार ई. सं. २०१९ फेब्रुअरी ०७ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य
अरुको पीडामा रुने शिशिर भण्डारी । गरिब दुखीका हिरो । सबैले शेयर गरौं (भिडियो हेर्नुस)